Garoonka Diyaaradaha Beledweyne oo la xiray | Keydmedia
Garoonka Diyaaradaha Beledweyne oo la xiray
Garoonka Diyaaradaha Beledweyne ayaysan u dhameystirneyn adeegyada loogu talagalay Garoon diyaaradeed, waxaana xusid mudan in garoonka laga waayay wax dam-damis ah oo lagu damiyo dambkii ka kacay Diyaaradii shilka ku gashay maalin kahor oo iskeed isaga bas beeshay.
Muqdisho, Soomaaliya – Waxaa maanta si ku meel gaar ah loo xiray Garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beleweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasoo maalin kahor uu ka dhacay shil diyaaradeed oo aan wax khasaaro nafeed ah sababin.
Garoonka ayaa waxaa maalinamdii Taalaada aheyd ku soo dhacday Diyaarad xamuul ah oo shixnad gargaar bini'aadanimo u sidday dadkii dhibaatada kasoo gaartay fatahaadii Beledweyne ka dhacday sanadkan, kadib markii uu dhabaha garoonka [runway] soo dhex istaagay Dameer la sheegay in uu shilka sababay.
Wasiirka Duulista Hawada Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar iyo guddi xaqiiqo raadin ah oo shalay gaaray magaalada Beledweyne ayaa la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan goroonka Diyaaradaha iyo Saraakiisha AMISOM.
Agaasimaha Duulista Rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo ka mid ahaa wafdiga, ayaa sheegay in garoonka uu muddo xirnaan doono, si looga nadiifiyo bur-burka Diyaaradda, sidoo kalena qiimeyn lagu sameeyo dhismihiisa.
Lama sheegin muddada u xirnaan doono garoonka oo muhiim u ah isu socdka bulshda gobolka Hiiraan, waxaana xusid mudan in shilkaan qaabka uu u dhacay ay cabasho ka keeneen saraakiil ka tirsan xafiiska Qaramada Midoobay oo diyaaradda u kireysnayd.
0 Comments Topics: diyaarad soo dhacday hiiraan soomaaliya